Otu ID3 mkpado bụ a metadata akpa na-eji iji chekwaa ihe ọmụma banyere ihe MP3 faịlụ. The mkpa na ozi banyere ihe ọdịyo faịlụ dị ka aha onye na-ese, album, track ọnụ ọgụgụ, track na aha ma genre na-agbakwunyere n'ime ọdịyo faịlụ onwe ya na ID3 usoro.
The ọmụma echekwara na ID3 mkpado nke ọdịyo faịlụ ga-agbanwe, dezie ma ọ bụ n'ụzọ wepụrụ kpamkpam kpam kpam. Iji mee otú ahụ, ị ​​nwere ike ibudata na-eji ihe ọ bụla mkpado edezi software aka tagger.
A tagger bụ ngwa na-eji na-dezie metadata (na ID3 format) nke ọdịyo faịlụ. Nzube bụ isi nke mkpado editọ bụ leruo na idozi ihe ọmụma ndị na-agbakwunyere n'ime multimedia faịlụ. E nwere ọtụtụ taggers dị na Internet na ma free na akwụ ụgwọ nsụgharị na nwere ike ibudata na-eji iji hazie egwu gị ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma.
N'elu free ID3 mkpado editọ na ike ga-ibudatara na Ịntanetị for free bụ:
Download njikọ: http://www.id3tageditor.com
The ID3 Tag Editor bụ a free software na ike ga-eji maka ma onye na azụmahịa nzube. The software akwado ma ndị ID3 nsụgharị: ID3V1 na ID3V2. Iji ID3 Tag Editor software, ị nwere ike idezi na metadata na na-agbakwunyere na audio faịlụ na ID3 usoro. Usoro ihe omume-enye gị ohere na-awụlikwa elu mfe ka kpọmkwem ebe nke agbakwunyere ọmụma n'ime ọdịyo faịlụ, si otú kwe gị dezie na nyegharịa ID3 mkpado rụọ ọrụ nke ọma na na ala.
The ID3 Tag Editor ngwa:
•-enye gị ohere tinye gị onwe gị na-ekwu nke ọdịyo faịlụ.
•-enye a synchronized slide show nke oyiyi na utu aha n'oge audio playback.
• akwado agbakwunyere cover foto.
• akwado ọhụrụ ID3 nsụgharị.
•-akwado ma Windows Vista 32-bit na 64-bit mbipụta.
Akwado Operating Systems: Windows XP / Windows Vista System chọrọ: The software achọ a na kọmputa usoro ndị na-esonụ ngwaike arụ ọrụ kwesịrị ekwesị: • Processor: 500 MHz processor. The ngwa ngwa ka mma. • Ram: Opekempe 256 MB: atụ aro: 512 MB ​​ma ọ bụ karịa Star Rating: 4 Stars nke 5 (nkezi ọrụ fim)
• Ọ a free software na-enweghị mgbasa ozi ma ọ spywares n'ime.
• Ọ a onye ọrụ-enyi na enyi ngwa dị ka ọ na-enye gị ohere nyegharịa mkpado a ire ụtọ na ụzọ dị mfe.
• bụ pụtara kensinammuo.
•-enyere gị na-ele ọmụma n'ụdị a synchronized slide show n'oge playback.
• adịghị akwado multi-faịlụ edezi (ogbe edezi).
Download njikọ: http://download.cnet.com/ID3-TagIT/3000-2169_4-10544467.html
Version: 3.3 Size: 1,26 MB
ID3-TagIT bụ a free software na a na-eji nyegharịa ma dezie metadata nke ID3 mkpado na MP3 faịlụ. The software scrutinizes na ụdị ihe ọmụma ndị na-agbakwunyere na ID3 format ke ọdịyo faịlụ. Gịnị na-eme ID3-TagIT dị iche iche na elu site na ndị ọzọ taggers bụ na-eji nke a software, ị pụrụ ọbụna dezie ID3 mkpado na otutu faịlụ (usoro maara dị ka ogbe edezi), na ike mfe hazie faịlụ na nchekwa.
Akwado Operating Systems: The software na-kpọmkwem haziri maka Windows n'elu ikpo okwu. Star Rating: 4 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
•-akwado ma otu faịlụ edezi na ogbe edezi.
•-akwado ma ID3V1 na ID3V2 nsụgharị.
• Ọ nwere mfe ọrụ interface enweghị ihe ọ bụla na-enweghị isi toolbars. A na-eme edezi mkpado mfe na ngwa ngwa.
• Ọ onye kensinammuo na onye ọrụ-enyi na enyi omume.
• The software nwere ike ijikwa ọtụtụ ihe na-Genres na ID3V2 na mkpado.
• Ahazie faịlụ n'ime nchekwa.
otu n'ime isi drawbacks nke ID3-TagIT bụ na n'ihu mmepe nke a software e kwụsị, ya mere ndị ọhụrụ nsụgharị nke usoro ihe omume bụ adịghị.
Download njikọ: http://download.cnet.com/Stamp-ID3-Tag-Editor/3000-2141_4-10580125.html (dị na ma free ikpe mbipute na akwụ ụgwọ ọkachamara version).
Stamp ID3 Tag Editor-enyere gị aka nyegharịa, dezie na ihichapụ metadata agbakwunyere n'ime ọdịyo faịlụ. Dị otú ahụ metadata na-akasị echekwara na ID3 usoro. The software-enyere gị aka dezie ozi dị ka genre, aha, ọgụ egwu, album, afọ, track ọnụ ọgụgụ, na-ekwu ihe ọdịyo faịlụ nke nwere ike inyere gị aka hazie egwu gị ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma.
Star Rating: 3 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
•-enyere gị aka dezie metadata ozi echekwara na .WAV, .mp3, na ihe ọ bụla ọzọ audio faịlụ Ọkpụkpọ na-akwado ID3 mkpado.
• akwado multiple faịlụ edezi (ma ọ bụ ogbe edezi).
•-enyere gị aka-ege ntị ọdịyo faịlụ n'ihu edezi ya ID3 mkpado.
• Ọ dịla mmachi nkwado maka edezi .WAV faịlụ metadata.
• ọ dịghị ka ị gbakwunye oghere n'etiti okwu. Tapping spacebar ejije họrọ song kama na-agbakwunye a ohere.
• Ọ dịla enweghị isi ọkpụrụkpụ tinye-ons.
• ọ dịghị ka ị dee gị onwe gị genre ma ọ bụ Atiya na ị na-emetụkwa họrọ otu n'ime ndị na ndepụta nke nhọrọ Genres ugbu n'ime software onwe ya.
Download njikọ: http://www.mp3tag.de/en/download.html
MP3Tag bụ a freeware ngwa na-abịa na ihe dị mfe na-eji windows interface. Ị nwere ike iji software dezie ID3 mkpado nke na-agụnye aha nke song, ese, album aha, n'afọ nke ntọhapụ, track ọnụ ọgụgụ, na genre. Ihe bụ isi na mkpado na-egosipụta na customizable n'ihu panel, ebe agbatiri mkpado na-egosi na a iche iche window. Ngwa-akwado online nchekwa data lookups kwe gị ka embed multiple oyiyi maka gị album cover.
Akwado Operating System: Windows Star Rating: 4 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
•-akwado ọtụtụ ndị nkịtị metadata formats gụnyere ID3V1, ID3V2.3, ID3V2.4, iTunes MP4, .WMA, na adaka mkpado.
• Ọ dịla akpaka Gbanwé aha atụmatụ na renames ọdịyo faịlụ dabere na ya mkpado ọmụma.
• eme ogbe edezi.
• akwado edezi cover oyiyi.
•-enyere gị aka mbubata mkpado site online ọdụ data.
•-emepụta ndepụta ọkpụkpọ na-akpaghị aka mgbe edezi.
• Full Unicode nkwado.
• Ọ dịghị dị obere version.
• enye nhọrọ nke na-agbakwunye lyrics kọlụm ke n'ihu panel, ma bụ nanị 6 edoghi na bụ inextensible.
Download njikọ: http://download.cnet.com/TigoTago/3000-2141_4-10414585.html
TigoTago bụ a spreadsheet dabeere mkpado nchịkọta akụkọ na-enyere gị dezie ID3 mkpado nke otutu faịlụ rụọ ọrụ nke ọma. The ogbe edezi atụmatụ-enyere gị aka mfe gbanwee na mkpado ma nyegharịa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ na otu laa. Ngwa-akwado ma isi na akp mkpado.
Akwado Operating System: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8. Star Rating: 4 n'ime 5 kpakpando (nkezi ọrụ fim)
• akwado online nchekwa data lookups on freedb.org na discogs.com.
• enye http njikọ na proxy ikike.
• Ọ dịla a ọrụ enyi na enyi Help Forum na-enye nkọwa na-aza na otutu screenshots.
•-enye gị ohere ịhụchalụ niile mgbanwe tupu azọpụta.
• Enye ohere online nchekwa data search si nanị abụọ weebụsaịtị.
• adịghị nwere omenala menus dị ka ndị ọzọ interfaces nke Windows-dabere na ngwa na-eme.
• adịghị ihe ọ bụla na-ebugharị ebugharị version tọhapụrụ rue ụbọchị.
> Resource> Free> Top 5 Free ID3 Tag Editors